Kuvuke iminjunju kuNyanda ebalisa kuKhomishini - Bayede News
UBUFAKAZI obethulwe kuleli sonto kuKhomishini emayelana nokugwamandwa kombuso buphinde baveza obala ubuthakathaka ebuholini obuphezulu beqembu elibusayo, nokugxambukela komndeni wakwaGupta ekuqashweni kongqongqoshe osekuvele izikhathi eziningi kule Khomishini. Izolo ubufakazi bethulwe ngowayenguNgqongqoshe Wezezimali uMnu uTrevor Manuel nowayephethe Ezokuxhumana uJenene uSiphiwe Nyanda.
Ebufakazini uNyanda ukuqinisekisile okwavezwa uMnu uFikile Mbalula emhlanganweni wesigungu esiphezulu se-ANC ngowezi-2011 lapho atshela khona ozakwabo ukuthi umndeni wakwaGupta umncinze indlebe ngokuthi uzoqokwa njengongqongqoshe.
UNyanda owayeyilungu lesigungu esiphezulu ngaleso sikhathi, uchaze indlela uMbalula abhoboza ngayo ithumba ngezindaba zokuqashwa kwakhe njengoNgqongqoshe Wezemidlalo.
Ubufakazi bukaNyanda buhambisane nobukaManuel naye owayekhona kulowo mhlangano.
“UMbalula wasibikela ukuthi wasukelwa abomndeni wakwaGupta bamtshela ukuthi uzoba uNgqongqoshe Wezemidlalo okuyinto ayazi ngisho nangaphambi kokuba kwazi izikhulu eziphezulu eqenjini ngisho noMengameli uqobo.
Nebala uMbalula waqashwa kulesiya sikhundla,” kusho uNyanda ebufakazini.
“Okwenza ngisale ngikhexile ngibalisa ngenhlangano nohulumeni wethu ukuzwa uMbalula esibikela ngalezi zindaba.
Kwakuyindlela atshelwa ngayo engamukelekile. Ngenye indlela konke lokhu kwamehla ngaphezulu,” kusho uNyanda obebonakala ukuthi namanje lezi zindaba zisamvusela iminjunju.
INkantolo YoMthethosisekelo iweze izisebenzi zasezindlini ngelibanzi
Uthe kwakungokokuqala ezwa umuntu ekhuluma iqiniso lodwa neqiniso lonke ngokuqashwa kwakhe ngale ndlela, futhi wakukholwa konke ayekusho kwamfikela nokuthi kungenzeka ukuthi akuyena yedwa”.
Phambilini ebufakazini bakhe uManuel uthe ukhumbula ukuthi kwakushubile emhlanganweni wesigungu esiphezulu kukhulunywa ngokuthi yini lena engaka ngomndeni wakwaGupta engaze yenze ubalawule njengeqembu elibusayo. Okunye engikukhumbulayo ukuthi ngesikhathi sekufika ithuba lokuba uMbalula akhulume wafikelwa umunyu. Uthe wayejabula ngokuthi uzoba ungqongqoshe kodwa futhi ezibuza ukuthi kwakungani lezo zindaba ziqhamuke ngomuntu womndeni wakwaGupta. “Kwakungumsebenzi nelungelo likaMengameli ukuqasha ongqongqoshe, kodwa lelo lungelo lase lephuliwe’. UManuel uthe uMbalula wakhala ngesikhathi ebatshela ngalezi zindaba zokuqashwa kwakhe ngumndeni wakwaGupta kwesobungqongqoshe. Esicelweni sika-Ajay Gupta sokuphonsa imibuzo uManuel esachithwa nguSihlalo weKhomishini uMehluleli uZondo, u-Ajay wayezoveza ukuthi nguye owahlangana noMbalula, hhayi umfowabo u-Atul njengoba uManuel aveza esitatimendeni asenza. UManuel ubuye wazwakalisa ukukhathazeka ngokwehluleka kwe-ANC ukusebenzisa izingwevu zayo ekwenzeni ngcono isimo sokuthunyelwa kwezidingo emphakathini ezweni lonke. Nakuba uManuel ethe uMbalula waba umholi wokuqala we- ANC ukuvuma ukuthi walingwa umndeni wakwaGupta, uyakholwa ukuthi babekhona abanye ababemanqika ukuphumela obala ngalokhu. Lo mholi osesethimbeni labakhongi bakaMengameli uCyril Ramaphosa ubuye wagxeka indlela i-ANC eyenza ngayo izinto selokhu yena aphuma ezikhundleni.
Uthe labo asebeke baphatha ezikhundleni eziphezulu kuHulumeni naku-ANC kumele babizwe ukuze bazosiza iqembu noHulumeni esimweni okuso. “Asikwazi ukuba yizitha. Asikwazi ukusebenzisa ubuchule bethu kwenye indawo. Singabantu baseNingizimu Afrika. Sazibophezela ekuhambisaneni noMthethosisekelo futhi kwakungekhona ukuthi sifuna ukuthola umsebenzi ePhalamende njengongqongqoshe,” kusho uManuel. Uthe kunesidingo sokuthi labo abasezikhundleni kuHulumeni bacijwe ngamakhono.
“Asikwazi ukuphila ngemithetho yasehlathini. Kumele labo esibakhethile ukuthi basimele ePhalamende sibanike amandla futhi sibeseke ngayo yonke indlela. Uma amalungu ePhalamende ecijwa ngendlela, angakwazi ukubhekana nezinselelo zomsebenzi wawo”.
nguMandla Zulu Feb 28, 2019